Biibiile Steel, Plate Steel, Bar - Huayi
Qalabka birta ee Shandong Huayi Co., Ltd. ayaa inta badan ku hawlan jumlada iyo tafaariiqda.
Sanadihii la soo dhaafay, waxay xiriir wanaagsan oo iskaashi la yeelatay shirkado ku jira warshado kala duwan sida warshadaha kiimikada, wax soo saarka mashiinnada, warshadda korontada, iwm, waxayna urursatay aqoon xirfadeed oo qani ah oo qani ah, Ka dibna si fiican bay ugu adeegi kartaa macaamiisha.
Muddo sanado ah waxaan u hoggaansannaa “tayada marka hore, frist credit, macaamilka ugu horreeya, daacad-ku-saleysan” mabaadi’da hawlgalka ee horumarinta suuqa oo aan ka helno kalsoonida sare macaamiisha.
Tayada Sare ee Warshadda 304 316 310s ste ...
ASTM304 316 310s SUS304 SUS316L ahama ...
Haddii aad u baahan tahay alaab tayo sare leh, waxaan haynaa agabyo waaweyn
Haddii aad leedahay shuruudo gaar ah oo ku saabsan badeecadaha, fadlan nala soo socodsii, oo waxaannu samayn doonnaa badeecado ku qanciya; haddii aadan si fiican u garanayn badeecadaha, fadlan nala tasho waqtiga; haddii aad Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid badeecada, fadlan nala soo xiriir ...